Halyaaygii Hore Kooxda Chelsea Hasselbaink Oo Talo Wax Ku Ool Ah Siiyey Macalin Lampard
HomeHoryaalka IngiriiskaHalyaaygii hore kooxda Chelsea Hasselbaink oo talo wax ku ool ah siiyey macalin Lampard
Jimmy Floyd Hasselbaink ayaa ku booriyay Chelsea in ay u dhaqaaqdo adeega labo ciyaaryahan bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga si ay uga caawiyaan Frank Lampard in kooxdiisa ku guuleysato koobka Premier League.
Kooxda ka dhisan Galbeedka London ayaa haatan ku jirta kaalinta seddexaad ee kala sareynta Premier League iyagoo labo dhibcood ka hooseeya kooxda hogaanka heysa ee Tottenham Hotspur – iyadoo afar guul ka gaartay sideed kulan oo ay ciyaareen.
Kooxda Lampard ayaa ku dhameysatay kaalinta afaraad xilli ciyaareedkii hore, si kastaba ha noqotee, waxay rajo ka qabtaa in ay ku sii dhawaato hanashada horyaalka ka dib xagaaygaan ay kusoo biireen xidigaha kala ah Tiago Silva, Ben Chilwell, Timo Werner, Kai Havertz iyo Hakim Zyech, waxa soo bandhigeen qaab ciyaareed wanaagsan kulamadii ay ciyaareen markii laga reebo kai Havertz oo noqon sidii loo baahnaay.
Hasselbaink ayaa rumeysan in Blues ay ku dhowdahay hanashada horyaalka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku booriyay kooxdiisii ​​hore inay ilaashadaan daafac – midkood Milan Skriniar oo ka tirsan Caglar Soyuncu iyo waliba qadka dhexe ee weerarka.
Wuxuu u sheegay Ladbrokes: ‘Dad badan ayaa ka hadlaya Kalidou Koulibaly laakiin waa 29 jir aadna u qaali ah.
Xaqiiqdii waan jeclahay daafaca kooxda Leicester Caglar Soyuncu. Waxaan qabaa inuu aad ugu fiicnaan lahaay Chelsea.
Sidoo kale daafaca kooxda Inter Milan, Milan Skriniar – qof walba wuu ka hadlayaa isaga, waa ciyaaryahan aad u wanaagsan Chelsea wax badan ka caawin kara hadii oo kusoo biiro, sidaas waxaa dhahay halyaaygii hore Chelses Hasselbaink.